▄ ကိုဗစ် လွန် / မလွန် – Min Thayt
• အကဲဖြတ် မေးခွန်းများ
• စဉ်းစားစရာ ကောက်ချက်များ။
• ဖလားထိုးပေါ်လစီနှင့် တစ်ပွဲထိုးမဟာဗျူဟာ အလုပ်ဖြစ်/ မဖြစ်။
• အရေးပေါ်အားဖြင့် ထည့်တွက်မထားသော
• သက်ရောက်မှု ကျယ်ပြန့်သော
• ထိန်းချုပ်က ခက်ခဲသော
အန္တရာယ်၊ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းများနှင့် ကြုံဆုံရတတ်ပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေသည် ဤသို့ဤပုံ ဖြစ်ပါသည်။ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းနှင့် ပြဿနာများသည် ငုပ်နေသည်များကို ပေါ်စေသည်။ ငုပ်လျှိုး ပုန်းအောင်နေသည်များကို ထင်ရှားလာစေခဲ့ပါသည်။ ယခင် သာမန်အချိန်၊ ပုံမှန်အခြေအနေများတွင် သိသိ သာသာ မျက်နှာမပြသော လက္ခဏာရပ်များသည်၊ အန္တရာယ်နှင့် ကြုံချိန်၊ အခက်အခဲနှင့် ကြုံချိန်၊ အကျပ် အတည်းကျရောက်ချိန်၊ ပြဿနာများနှင့် ကသောင်းကနင်းဖြစ်နေချိန်တို့တွင် ထင်ထင်ရှားရှား ကိုယ်ယောင် ကိုယ်ဝါ ပြလာလေ့ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ၊ တစ်ဦးချင်း၏ ငုပ်လျှိုးဗီဇများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ သိုဝှက်စရိုက် လက္ခဏာများဖြစ်ပါသည်။
ကိုဗစ် ကပ်ဘေးအလွန် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၌၊ တွေ့ရှိချက်အသစ်များကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ရပါလိမ့် မည်။ တွေ့ရှိချက်အသစ်များဆိုတာ ဘာပါလဲ။
• ငုပ်လျှိုး ဖုံးဖိထားသော
• သဏ္ဍာန်လုပ် သရုပ်ဆောင်ထားသော စရိုက်များသည်
မျက်ဝါးထင်ထင် ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ တစ်ဦးချင်းမှသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံး၏ စရိုက်လက္ခဏာ အနေအထားကို အစစ်အမှန်အတိုင်း မြင်နိုင်၊ ကြည့်နိုင်၊ လေ့လာနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆပါတယ်။ ယခု ကပ်ဘေး ကာလသည် ဖြစ်ပျက်မှု အခင်းအကျင်းကြီးဖြစ်ပါသည်။ လူတို့သည် ယခုလို ကပ်ဘေး အကျပ်အတည်းကာလ တွင် ဘယ်သို့သော အပြုအမူစရိုက်များကို ပြုမူကြသနည်း…. ဆိုသည့် မေးခွန်းကို ဆုပ်ကိုင် မေးမြန်းကြည့်ဖို့ လိုပါသည်။ ထိုမေးခွန်းဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အကဲဖြတ်သလို၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်ဖို့ဖြစ်ပါ သည်။ ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အရည်အသွေးများက ဘာများပါသလဲ…..။
ကပ်ဘေး၏ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် နေ့စဉ် လူမှုဘဝများသည် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရော၊ အနည်းအများပါ ရိုက်ခတ်မှု ရှိနေပါသည်။ ထိုအခြေအနေသည်၊ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်ခံအား ကို အကဲဖြတ်နိုင်မည့် အခင်း အကျင်းအဖြစ် ပေါ်လာပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ကပ်ဘေးသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို စာမေးပွဲစစ်နေခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အရည်အသွေးကို အကဲဖြတ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘယ်သို့သော ပေတံ မေးခွန်းများဖြင့် အကဲဖြတ်ပါသနည်း….။
ပထမဆုံး မေးခွန်းမှာ၊ နိုင်ငံတော်နှင့် အုပ်ချုပ်မှုစံစနစ်ဖြင့် စရပါမည်။
အဘက်ဘက်က ပြိုဆင်း ယိုယွင်းလာခဲ့သော မြန်မာ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်သည်၊ ကပ်ဘေးကာလ၌ နှာခေါင်းကျည် ပွေ့တွေ့နေရပြီဖြစ်ပါသည်။ ယခင် ယခင်များကလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးရိုက်ခတ်ချက် မဟုတ်သော နိုင်ငံတွင်း ဒေသဆိုင်ရာ အရေးပေါ် ဘေးအန္တရာယ်များ ကြုံခဲ့ပါသည်။ ရေကြီးရေလျှံခြင်း၊ မြေပြိုခြင်း၊ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ် ခြင်း၊ ရာသီဥတု ပူပြင်း၍ ရေရှားပါးခြင်း စသည့် သဘာဝဘေးများဖြင့် ကြုံခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် တိုက် ခတ်ခံရသော နာဂစ်မုန်တိုင်းသည် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများတွင် ကျရောက်ခဲ့ပါသည်။ လူပေါင်း သိန်း နှင့်ချီ သေကြေခဲ့၍ လူပေါင်းသိန်းနှင့်ချီ ဘဝရပ်တည်ချက်များ ယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ ထိုကာလ၌ ပျက်စီး သွားသော လူမှုဘဝများကို ပြန်လည်ကုစားခဲ့သည့် နိုင်ငံတော်အစီအစဉ်များ ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဘယ်၍ ဘယ်မျှ ထိရောက်ခဲ့ပါသလဲ။ ဤဖြစ်ရပ်ကို သုတေသနပြုလေ့လာထားသည့် သုတေသနစာတမ်းများ ရှိပါ သည်။ တွေ့ရှိချက်များမှာ အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သော ရလဒ်များသာ တွေ့ရပါသည်။
ထို့နောက် ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၂၀ ကာလအတွင်း ရေကြီးရေလျှံမှုဘေး၊ ရေရှားပါးခြင်း၊ ရာသီဥတုပူပြင်းခြင်းနှင့် မြေပြိုခြင်း စသည့် ဘေးဒုက္ခများ ဆိုင်ရာဒေသအလျောက် ကြုံဆုံခဲ့ပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအထိ မဟုတ်စေကာမူ၊ ဒေသအလိုက် ထိခိုက်မှုပြင်းထန်သော လူမှုဘဝများ များစွာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဖြစ်စဉ်များ၌ နိုင်ငံတော်ယန္တရားသည် ပြည်သူတို့၏ နေ့စဉ် လူမှုဘဝများကို ဘယ်လောက် အမြော်အမြင်ရှိရှိ မူဝါဒချ၊ ကုစား စီမံနိုင်ခဲ့ပါသနည်း။
ကျနော်တို့သည် နိုင်ငံတော် ယန္တရားနှင့် အုပ်ချုပ်စီမံခေါင်းဆောင်မှုစနစ်ကို အမြဲတမ်းလိုလို မေးခွန်းထုတ်နေရပါ လိမ့်မည်။ ချိနဲ့ ယိုယွင်း၍ လူမမာကဲ့သို့သော လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ကြံ့ခိုင်သန်မာ၍ အမြော်အမြင်ရှိရှိ စီမံကွပ်ကဲ နိုင်သော အရည်အသွေးပြည့် အုပ်ချုပ်မှု ယန္တရားကို မျှော်လင့်လို့ မရနိုင်ပါ။ မျှော်လင့်လို့ မရနိုင်စေကာမူ၊ ဒီ အတိုင်း ပြစ်ပယ်ထားရန်လည်း မဟုတ်ပါ။ ဘေးထိုင် ဘုပြောများသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် နိုင်ငံတော်လည်း အလားတူ ချိနဲ့နေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ယခု ကိုဗစ်ကပ်ဘေး၌ ပို၍ပင် သိသာလာပါသည်။
ယခင်က လူမှုကယ်ဆယ်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့လောက်နှင့် အရေးပေါ် စီမံခန့်ခွဲ ကုစားကြရသည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ယခု ထိုသို့ မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတော် အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးအပြင်၊ ဗြူရိုကရေစီ ယန္တရားတစ်ခုလုံးကပါ အရေးပေါ်အခြေအနေကို ထိန်းချုပ်ရန် ပါဝင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အတူ လူမှုအဖွဲ့အစည်း အပါအဝင် လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိ မဏ္ဍိုင်အသီးသီးကပါ ဝင်ရောက် ဝိုင်းဝန်း ကိုင်တွယ်နေရသည့် အနေအထားဖြစ် ပါသည်။ အပင်ပန်းဆုံးမှာ၊ ကျန်းမာရေးဌာနမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း၊ ဆရာဝန်၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများဖြစ် သည်။
ခေတ်အဆက်ဆက်က လျစ်လျှူရှုခံရသော၊ ဦးစားပေးမခံရသော၊ အသုံးစရိတ်အနည်းဆုံးထဲက တစ်ခုသော ကျန်းမာရေးဌာန၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် စိတ်ဓာတ်က တစ်ရာ၊ ခွန်အားက ဗလာဖြစ်နေဆဲဖြစ်နေပါသည်။ သာမန်လူတစ်ယောက်အား သံရိုက်၊ လွှထိုး အလုပ်များ ခဏနှင့် သင်ပေးလို့ ရငြားသော်လည်း၊ ဆေးထိုးအပ် ကိုင်သည့်အလုပ်ကို ချက်ချင်းလက်ငင်း ခဏနှင့် သင်ပေးလို့ မရပါ။ လူထုကျန်းမာရေး (community health) ကို ခေတ်အဆက်ဆက် လျစ်လျှူရှုခံခြင်းသည်၊ ယခုအချိန်၌ လက်တွေ့ နှာခေါင်းကျည်ပွေ့တွေ့နေရပြီဖြစ် သည်။ ခွန်အားဗလာပေမယ့်၊ စိတ်ဓာတ် အထောင်အသောင်းဖြင့် ထိန်းထားနိုင်သော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ကူခြင်းကယ်ခြင်းကြောင့်သာ အဆုံးစွန်ဆုံး ဆိုးဝါးခြင်း မဖြစ်သေးဟု နားလည်ရပါသည်။
ဤကား နိုင်ငံတော်ယန္တရားနှင့် အုပ်ချုပ်မှုစံစနစ်အတွက် အကဲဖြတ်ရမည့် စဉ်းစားချက်များဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေး အဆောက်အအုံသည် မပြိုလဲသေးသည့်တိုင်၊ နူရာဝဲစွဲ လဲရာ သူခိုးထောင်းအဖြစ်နှင့် ကြုံနေရပါသည်။ စီးပွားရေးကဏ္ဍကြီးတစ်ခုလုံးသည်၊ ပြည်ပကို အားကိုး အားထားနေရ၍ နိုင်ငံကြီးများ (တရုတ်)၏ လောင်းရိပ်အောက်တွင် ရုန်းမထွက်နိုင်သေးသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်ပါသည်။ အထွေထွေသော ကုန် စည်များသည် ပြည်ပနှင့် မကင်း။ ပြည်ပ၏ ထုတ်ကုန်များကိုသာ သွင်းယူ သုံးစွဲနေရသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်အတွင်း၌ ကုန်ကြမ်းသာ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်နိုင်သည် ဆိုသော်ငြားလည်း၊ စိုက် ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်များသည် ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် မယှဉ်နိုင်။ ပို့ကုန်အရည်အသွေး မမှီ။ အကြောင်း (၂) ရပ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ နံပါတ် (၁) အမြောက်အမြား မထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း နှင့် နံပါတ် (၂) အရည်အသွေး မမှီခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ တနည်းဆိုရသော် အရည်အသွေး တစ်ပြေးညီ ထုတ်ကုန်များကို အမြောက်အမြား မထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သယံဇာတထုတ်ကုန်များဖြစ်သည့်၊ ရုပ်ကြွင်းလောင်စာ၊ သစ်၊ ကျောက် မျက်…. စသည်တို့သည်သာ ကုန်ကြမ်းအနေဖြင့် ပို့ကုန်အရည်အသွေး အလွန်မှီနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှ လွဲ ၍ ကျန်သောထုတ်ကုန်အားလုံးမှာ ရွက်ကြမ်းရေကျို အဆင့်ထက် မပို။
တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံသည် နေဖြစ်ရုံတစ်မယ် အနေအထားမျှသာဖြစ်ပါသည်။ ကိန်းဂဏန်း များက စီးပွားရေး တိုးတက်မှုညွှန်းကိန်းကို အပေါင်းလက္ခဏာပြသော်လည်း လက်တွေ့ လူမှုစီးပွားဘဝများမှာ ထင်သလောက် မပြောင်ရောင်။ မစိုပြေ။ မလန်းဆန်း။ ယခုလို အကျပ်အတည်းကာလ၌ နှာခေါင်းကျည်ပွေ့ တွေ့နေရပြီဖြစ်သည်။
တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရသည့် နေ့စား နင်းပြားများ၏ ဘဝများသည်း သိန်းသောင်းကုဋေရှိနေပါသည်။ လက် လှုပ်မှ ပါးစပ်လှုပ်ရသည့် ကျောမွဲများ၏ ဘဝသည် အသိန်းအသောင်းကုဋေ ရှိနေပါသည်။ မြေပေါသော်လည်း နေစရာ ရှားသည့် တိုင်းပြည်၌ ကျနော်တို့ နေထိုင်နေရပါသည်။ မြန်မာပြည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက ဓနဥစ္စာ ခွဲဝေမှုသည် တစ်ဖက်စောင်းနင်းဖြစ်နေပါသေးသည်။ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှုသည်၊ ကြီးမားကျယ်ပြန့်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ဓနရှိလူတန်းစားများသည် သုံးမကုန်အောင် ရှိနေ၍ ဓနမဲ့လူတန်းစားသည် တစ်ထွက်သော ဝမ်းကို ပင် မဖြည့်နိုင်သည့် အခြေအနေ၌ ရှိနေပါသည်။ စက်ရုံကြီးများနဘေး၌ အချိန်တန် မီးဖိုချောင်မှာ မီးခိုးမအူနိုင် သော ဘဝများ အထင်းသား ဘွင်းဘွင်းကြီး ပေါ်လာနေပါသည်။
စီးပွားရေး အုပ်ချုပ်စီမံမှုသည် အလှူပေးနေသော ပေါ်လစီဖြင့် အလုပ်မဖြစ်ဆိုတာကို၊ လက်တွေ့နားလည်မည် ဟု ထင်ပါသည်။ ယခင်က ဘေးအန္တရာယ်ကြုံလျှင်၊ လှူကြတန်းကြ၊ ဖေးကြ မ,ကြ၊ ဝိုင်းကြ ဝန်းကြဖြင့် တစ်ယောက်တစ်လက် ကူညီရုံဖြင့် ဖလားထိုးပေါ်လစီက အလုပ်ဖြစ်သည့်တိုင်၊ ယခုမူ ထိုသို့ မဟုတ်တော့ပါ။ ရေရှည်၌ ဉာဏ်အမြော်အမြင်ဖြင့် ခိုင်မာသော စီးပွားရေး အဆောက်အအုံကို မတည်ဆောက်ခဲ့ကြပဲ တစ်ပွဲထိုး ပေါ်လစီဖြင့် စခန်းသွားခဲ့သည်မှာ ကြာခဲ့ပြီ။ ယခု ကပ်ဘေးအခြေအနေ၌ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံ၏ သက်လုံ နှင့် ကိုယ်ခံအားကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။
ဖလားထိုးပေါ်လစီနှင့် တစ်ပွဲထိုး မဟာဗျူဟာကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်သင့်ပြီဟု နားလည်လက်ခံစေလိုပါသည်။
လူတစ်ဦးချင်းအကြား ရိုင်းပင်းကူညီမှု၊ ဖေးမမှုများကို ကပ်ဘေးကာလ၌ ခပ်စိပ်စိပ်တွေ့လာရ၍ ဝမ်းသာကြိုဆို မိပါသည်။ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၌ ငုပ်လျှိုးနေသော ယဉ်ကျေးမှုသဒ္ဓါဓာတ်ခံများ ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါပြလာပြီ ဟု သတိမူမိပါသည်။ သို့သော် ယခင်က မြန်မာတို့ ကြုံခဲ့သည်မှာ၊ ကာလအပိုင်းအခြား တစ်ခုသက်သက်မျှသာ။ ယခုတော့ ထိုသို့ မဟုတ်ပြီ။ ကာလသည် မည်မျှ ရှည်ကြာမည်ဟု မပြောနိုင်။ မခန့်မှန်းနိုင်။
ဆင်ပိန် ကျွဲအဆင့်ဖြစ်နေသည့်တိုင် ဖဲ့ပေးစရာ အသားရှိနိုင်ပါသေးသည်။ ကျွဲအဆင့်မှာ ဆိတ်အရွယ်သို့ ရောက်လာလျှင်ကား၊ မိသားစုအရေးသည် ပထမဦးစားပေးဖြစ်ရပါတော့မည်။ ပုလင်းပြည့်မှ ရေလျှံပါသည်။ တစ်ဝက်၊ ဖင်ကပ် ရှိသော ပုလင်း၌ ရေမလျှံနိုင်ပါ။ လောလောဆယ်၊ ပေးလှူနိုင်သေးသည့် အခြေအနေများ ရှိ နေသေး၌ နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ရပါသည်။ သို့သော် ရေရှည်၌ မည်သို့မည်ပုံဖြစ်ပါမည်နည်း။ အဖြေသည် လူမှုကော်စေး၏ ကပ်အားအပေါ်တွင် မူမတည်တော့ပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး၏ quality ဖြင့်သာ အဆုံး အဖြတ်ပြုရတော့မည်ဖြစ်သည်။
အပေါ်ထပ်အဆောက်အအုံမှသည် အောက်ခြေလူမှုအလွှာတန်းစားအထိ အကဲဖြတ်ရမည့် မေးခွန်းများ ရှိပါ သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အရည်အသွေးတစ်ခုလုံးသည် အပေါ်ထပ်အလွှာ တစ်ခုတည်းကို ကြည့်၍ တိုင်းတာ လို့ မရပါ။ အထက်လွှာ၏ လုပ်ရပ်များသည် အောက်ခြေအထိ သက်ရောက်သလို၊ အောက်ခြေက အပြုအမူ အမူအကျင့်များသည်လည်း အထက်လွှာတစ်ခုလုံးကို ယိုင်နဲ့စေပါသည်။ အပြန်အလှန် အညမညသဘောဖြင့် မှီတည်နေသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းသဘောဖြစ်ပါသည်။
• နိုင်ငံတော်၏ အုပ်ချုပ်မှုစံစနစ်၏ အရည်အသွေး မြင့်မှု/နိမ့်မှု၊ ညံ့ဖျင်းမှု/ထိန်းကျောင်းနိုင်မှု၊ ပဲ့ကိုင်နိုင်မှု၊ မြော်မြင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတစ်ခုလုံး၏ စုဖွဲ့လုပ်ဆောင်မှုအရည်အချင်းသည် လူထု အတွက် အကဲဖြတ်စရာ ကွင်းပြင်ဖြစ်လာပါသည်။
• အဘက်ဘက်၌ အလွယ်လုပ်၊ ပြီးစလွယ် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား၊ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး၍ ပြည်ပသို့ မှီခိုမှု လွန်ကျွံနေ၍ အလှမ်းကျယ်အလယ်လပ်နေသော စီးပွားရေးကဏ္ဍကြီးတစ်ခုလုံးသည် လက်တွေ့ လူမှု စီးပွားဘဝများကို ရေရှည်အားဖြင့် အာမခံချက် ပေးမထားနိုင်ကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပြီဖြစ်သည်။
• ဖလားထိုးဓလေ့၊ အရပ်ကူပါ လူဝိုင်းပါကြွေးကြော်သံဖြင့် အရေးပေါ် အခြေအနေတို့ကို ကူညီကယ် ဆယ်ခဲ့သည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်၊ ကာလတို အရေးပေါ် အခြေအနေ၌ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ရေရှည်အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုး၌ သဒ္ဓါဓာတ်ခံဖြင့် ကာလရှည်တောင့်မခံနိုင်ကြောင်း သတိချပ်သင့်ပါ သည်။
ဤဖြစ်ရပ် သုံးချက်သည်ပင်၊ ကပ်ဘေးအလွန်ကာလ၌ စနစ်တကျ ပြန်လည်တည်ဆောက် သိုင်းဝိုင်းပြုပြင်ရ မည့် အချက်များဖြစ်နိုင်ပါသည်။
နံနက် ဝး၄၂
၆၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၂၀။
Tagged Covid 19, Crisis, Government System, Leadership, Myanmar Economic, Myanmar Politics, Myanmar Society
Previous post ▄ ကျနော် ဝေဖန်ရေးသမား ဟုတ် / မဟုတ်
Next post ▄ ပါတော်မူ စစ်တမ်း